बल्ल ०.१०८६८ प्रतिशतको कोरोना परीक्षण, कहिले पुग्ला सतप्रतिशत ? - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
Home प्रदेश प्रदेश ३ बल्ल ०.१०८६८ प्रतिशतको कोरोना परीक्षण, कहिले पुग्ला सतप्रतिशत ?
कोरोना रोकथाममा सरकारको गफ धेरै, काम अस्तव्यस्त
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) ले देश आक्रान्त छ । तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अलमलमा छ । कहिले स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरणमा त कहिले मन्त्रालयको गेटमै पत्रकारलाई प्रवेश गर्न रोक लगाएर अलमल । संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयको उपलब्धि भनेको नियमित ४ः१५ मा पत्रकार सम्मेलन गर्ने बाहेक केहि नदेखिएको जनस्वास्थ्य विज्ञहरु बताउँछन् ।
कोभिड-१९ लाई मध्येनजर गर्दै झण्डै एक दर्जन समिती बने, अनि निर्देशिका, मार्गदर्शन र आदेशहरु पनि । ती निर्देशिका, आदेशहरु अलपत्र जस्तै छन् भने समितिहरु पनि कामबिहिन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले विभिन्न निर्देशिका, मार्गदर्शन बनाएका छौं । कार्यान्वयन तत्काल निकायले गर्नुपर्छ ।’
अहिले क्वारेन्टाईन खोरमा परिणत भएका छन् । संक्रमण अवधिभर आशंकितलाई छुट्टै राखेर रोगको निदान गर्ने परीक्षण विधि हो क्वारेन्टाइन । तर, तीनै क्वारेन्टाइनबाट संक्रमित भाग्न थालेका छन् भने क्वारेन्टाइन नै कोरोना जोखिमको ‘हटस्पट’ बनेका छन् । मानौं तपाईलाई आरटीपिसीआर प्रविधिबाट कोरोना परीक्षण गर्न मन लाग्यो भने पाउनुहुन्न, सोर्समा हुन्छ कोरोना परीक्षण ।
आइसोलेसनमा व्यक्तिहरुको ज्यान जान थालेको छ । कोभिड १९ संक्रमण बढ्दै जाँदा व्यक्तिहरुमा मानसिक तनाब बढेको छ । अन्य रोगले ग्रसित भएका बिरामीमा रोदन बढेको छ । अस्पताल जान समस्या छ, ओपीडि सेवा बन्द छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम निर्देशन दिने बाहेक केहि हुँदैन । न त अनुगमन संयन्त्रले काम गरेको छ । न त स्वास्थ्यमन्त्रीको आँखा आम छट्पटाइरहेका बिरामीमा परेको छ । अस्पतालहरु समेत असुरक्षित बन्दै गएका छन् ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा बिरामी गएर स्वास्थ्य जाँच गर्ने सुनिश्चितता छैन । त्यहाँ दुई जना संक्रमित आइसोलेसनमा छन् । अन्य अस्पतालहरुको हालत पनि उस्तै । अस्पतालहरुमा बिरामी सहि तरिकाले सुरक्षित भएर आउने वातावरण सृजना गर्न नसक्ने सरकारले कहिले बनाउला कोरोना विशेष अस्पताल । कोभिड १९ जिन पत्ता लगाउने कार्य गर्ने भनियो । तर कहिलेदेखि, कसरी र कहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन । अझ भन्नुपर्दा ठोस जबाफ छैन ।
अनुमति विना स्वास्थ्यका अधिकारीहरुले विदेशमा नेपालका पहिलो संक्रमितको ‘जिन सिक्वेन्सिङ’ अनुसन्धान गरेको गम्भिर आरोप छ । स्वास्थ्य सामाग्रि खरिद प्रकरणको किचलोमा रुमलिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई त्यो भन्दामाथि उठेर काम गर्ने फुर्सद कहिले होला ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिनहुँ कोभिड १९ जोखिम सम्बन्धि जानकारी गराउँछ । तर, कोभिड १९ संक्रमितको जिल्ला मात्रै भनेर अन्य पहिचान खुलाउँदैन । यसले गर्दा संक्रमण देखिएको पुष्टि हुनासाथ स्वास्थ्यका प्रवक्ताले जिल्लाको नाम मात्रै भन्दा सम्बन्धित जिल्लावासी त्रसित हुने गरेका छन् । पहिचान गर्ने जिम्मा पाएको इपिडिमियोलोजि तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा समेत खुलेर बोल्न मान्दैन । जसले गर्दा जिल्ला जिल्लामा ‘ट्रेसिङ’ गर्न समस्या भएको छ । इपिडिमियोलोजि तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका एक अधिकारीले भने, ‘हिजो सोमबार दाङका संक्रमित हुन् भन्ने त भयो । तर, स्थायी ठेगाना विस्तृत रुपमा टिपाउनुभएको रहेनछ ।’ सरोकारवालाहरुले यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको गम्भीर लापरबाहि भएको बताउँछन् ।
स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुको स्थिति विजोग छ । पर्याप्त स्वास्थ्य सामाग्रीको अभावका बिच कर्मचारीहरुले काम गर्नुपर्ने स्थिति छ । एक स्वास्थ्यका कर्मचारीले भने, ‘म कृष्णनगर नाकामा क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुको ज्वरो नाप्दै आएको छु । तर, के गर्नु सरकारले जोखिम भत्ता दिँदैंन रे । मनोबल बढाएकै छैन ।’ जनस्वास्थ्य विज्ञहरुका अनुसार कोभिड १९ रोकथाममा सरकारले प्रभावकारी कदम नचालेको बताउँछन् । जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रविन्द्र पाण्डेले भने, ‘सरकार अझै आरडिटी टेष्टको पछि दौडेको छ । यथाशीघ्र आरटीपिसिआर टेष्ट बढाउनुपर्छ ।’
तथ्याकंमा हेरौं ?
हालसम्म चार सय २ जनालाई कोभिड १९ संक्रमण पुष्टि भएको छ । जसमध्ये ३७ जना निको भएर फर्किएका छन् । १० माघ २०७६ मा पहिलोपटक संक्रमण पुष्टि भएको हो । यसरी हेर्दा नेपालमा संक्रमण देखिएको एक सय १४ दिन बित्यो, दैनिक तीन जनामा । हालसम्म ३७ जना निको भएर घर फर्किएका छन् । आरटीपिसीआर प्रविधिबाट ३२ हजार ६ सय ४ जनाको कोरोना परीक्षण भएको छ । उपत्यका भित्र र अन्य जिल्ला गरी चार सय ५७ जना आइसोलेसनमा उपचाररत छन् । २१ हजार ६ सय २३ जना क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएका छन् । सबै भन्दा उच्च जोखिममा रहेको प्रदेश नम्वर २ र ५ हो ।
यो पनि पढ्नुहोस मुलुकको समृद्धका लागि शान्ति सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता : मन्त्री जम्कटेल
संरचना कस्तो छ ?
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार झण्डै ३२ हजार जनशक्ती छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा । सरकारी चिकित्सक संघले झण्डै एक हजार दुई सय चिकित्सकहरु नेपालमा कार्यरत रहेको बताउँछ । हाल देशभर २६ हजार ९ सय ३० वटा हस्पिटल बेड छन् । एक हजार पाँच सय ९५ जना आइसीयू बेड रहेका छन् । आठ सय ४० भेन्टिलेटर, तीन हजार ७६ आइसोलेसन बेड रहेका छन् । देशभर ६१ हजार दुइ सय ४५ वटा क्वारेन्टाइन बेड रहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्किका अनुसार एक लाख संक्रमितसम्म नेपालले धान्न सक्ने बताए । उनले जोखिम बढी देखिएका बिरामीलाई अस्पतालमा भर्ना गर्ने र लक्षण नदेखिएकाले घरमै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी सरकार अघि बढेको बताए ।
सरकारले पटक पटक नेपाल संक्रमणको हिसाबले उच्च जोखिममा नरहेको दाबी गर्दै आएपनि दाबी असफल सावित हुँदै गएको छ । केहि दिन अघि स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले संक्रमणको अति उच्च जोखिममा नेपाल नरहेको राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा दाबी गरेका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुले समेत नेपालमा जोखिम दर नबढ्ने आँकलन गर्दै आएका थिए । नेपालमा हालसम्म दुइ जनाको मृत्यु भएको छ ।
मृत्युको प्रकृती हेरौं
घटना नम्वर १ः धुलिखेल अस्पतालमा मृत्यु भएकी सुत्केरी कोरोना भाइरसको संक्रमणकै कारण मृत्यु भयो । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा सुत्केरी भएकी उनी डिस्चार्ज भएपछि सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसे गएकी थिइन् । तर, श्वासप्रस्वासमा समस्या भएपछि उनलाई उपचारका लागि धुलिखेल अस्पताल ल्याइएको थियो । सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसेको २९ वर्षीया सुत्केरीको भेन्टिलेटरमा राख्ने तयारी भइरहेको समयमा मृत्यु भएको बताइएको छ । अस्पतालमा उनको स्वाब परीक्षणका क्रममा कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो । तर, उनको परिवारको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ ।
घटना नम्वर २ः बाँके नरैनापुर ५ का २५ वर्षका पुरुषको आईतबार कोभिड १९ का कारण मृत्यु भयो । उनी क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार ती युवालाई गत शनिबार राति ज्वरो आउने र झाडापखलाको समस्या देखिएको थियो । उनको स्वाब परीक्षणका क्रममा कोरोना पोजेटिभ देखिएको हो । उनी वैशाख ३० गते भारतबाट नेपाल आएका थिए । उनीसंग सम्पर्कमा आएकाहरुको कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ गर्ने कार्य भइरहेको स्वास्थ्य सम्वद्ध अधिकारीहरु बताउँछन् । यद्यपी स्वास्थ्य मन्त्रालयले अबदेखि शुल्क तिरेरै आरटीपिसीआर प्रविधि मार्फत् कोरोना परीक्षण गर्ने योजना बनाएको छ । ढिला नगरी यो कार्यलाई अघि बढाउनैपर्छ ।
नेपालमा मृत्युवरण हुने अवस्था सृजना भइसकेको बेला सरकारले ‘लकडाउन’ लम्ब्याउने बाहेक थप उपलब्ध कहिले हाँसिल गर्ला आम नागरिकले प्रश्न तेस्र्याइरहेका छन् । आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन नै असुरक्षित हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालय निकम्मा बनेको छ । प्रभावकारी कदम चालेर व्यवस्थित बनाउनुको साटो बेलुकी ४ः१५ मा संक्रमितको संख्या…..थप भनेर उपलव्धि मान्ने काम बन्द गरौं ।
यो पनि पढ्नुहोस १२५५ जनामा कोरोना पुष्टि, १४०४ जना संक्रमणमुक्त
Exclusive राजधानी समाचारदाता - November 30, 2020
थप १ हजार २ सय २८ जनामा कोरोना संक्रमण
Breaking News राजधानी समाचारदाता - September 3, 2020
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा थप १ हजार २ सय २८ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कोभिड– १९ सम्बन्धी...
कोभिड–१९, लकडाउन र अर्थोपार्जन
बिचार खेमराज निरौला - April 5, 2020
विश्व यतिखेर कोरोना भाइरसविरुद्ध लडाइँमा केन्द्रित छ । करिब तीन महिनाअघि चीनको वुहान प्रान्तबाट पैmलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) अहिले चीनमा मात्र सीमित...
प्रदेश रासस - March 19, 2020
उदयपुर । जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले पाँच वर्षिय नाबालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा एक...
खेल राजधानी समाचारदाता - May 23, 2020
अन्तराष्ट्रिय एजेन्सी - October 2, 2020
Editor-Picks राजधानी समाचारदाता - November 25, 2020
काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका पूर्वअध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने पक्राउ परेका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले न्यौपानलाई चण्डोलबाट पक्राउ गरेको हो । सीआईबीका...
नेप्से ६४ अंकले बढ्यो
काठमाडौं । बुधबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक ६४.७० अंकले बढेको छ । कारोबार भएदेखि नै उकालो लाग्न थालेको नेप्सेमा दोहोरो अंकमा बृद्धि भएको हो...
यो पनि पढ्नुहोस कोरोना संक्रमणबाट थप २५ जनाको मृत्यु